IQOO Z1 mara ọkwa ya na 144Hz Panel, Dimensity 1000+ na 5G Connection | Gam akporosis
iQOO na-aga n’ihu site n’iwebata onye otu ọhụụ mgbe ị kwusịrị iQOO Neo3 n’oge na-adịbeghị anya, ngwaọrụ nwere ọtụtụ atụmatụ yiri nke ahụ. Onye nrụpụta ahụ gbara mbọ ịrụ ọrụ ma weghaa usoro site na ịkụ nzọ na ihe nhazi kachasị ọhụrụ site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Taiwanese MediaTek.
iQOO Z1 Ọ bụ ama nke ejiri edozi ọtụtụ nkọwa tupu ngosi ahụ, ọ ga-ekwe omume ịmara CPU nke ọ na-emesị. Njupụta 1000+ ọ bụ mgbawa ga-enye gị nnukwu ọsọ, arụmọrụ dị mma na ihe a niile na njikọta nke ise.
1 iQOO Z1, atụmatụ niile nke ọkọlọtọ a
iQOO Z1, atụmatụ niile nke ọkọlọtọ a
El ohuru iQOO Z1 dị ka Nubia Red Ime Anwansi 5G O nwere enyo nwere etu onodu ohuru nke 144 Hz, ogwe a bu 6,57 sentimita asatọ na mkpebi HD zuru oke na nkwado HDR10. The ruru bụ 20: 9 na ọ bụ adabara ma ọ bụrụ na ị chọrọ igwu ọ bụla aha dị ka ọ na-akwado site na a ọma ndịna.
Ihe nlere IQOO Z1 nọkwasi MediaTek Njupụta 1000+ processor, GPU bụ Mali G-77, e nwere nsụgharị abụọ nke RAM, 6 na 8 GB, ebe na nchekwa ị nwere ike ịhọrọ 128 ma ọ bụ 256 GB UFS 3.1. Batrị arụnyere bụ 4.500 mAh na ụgwọ ngwa ngwa nke 44W, otu n'ime ngwa ngwa na ahịa taa.
Na mpaghara ese foto enwere ike ịhụ ihe mmetụta atọ, nke bụ isi bụ 48 MP, nke abụọ bụ 8 MP n'obosara, nke atọ bụ 2 MP bokeh, igwefoto onwe bụ 16 MP. Sọftụwia ahụ bụ iQOO UI na gam akporo 10, interface ahụ bụ mmegharị nke Vivo's FuntouchOS. Ọ nwere njikọta 5G, WiFi 6 na onye na-agụ mkpịsị aka na-abịa n'akụkụ.
IKIRU 6.57-anụ ọhịa IPS LCD nwere mkpebi HD zuru ezu (2.400 x 1080 pikselụ) - Ọnụego: 20: 9 - 144 Hz na-akwụghachi ume - HDR10
Nhazi MediaTek Dimens 1000+
Ohere TERLỌ N'IME 128/256 GB UFS 3.1
GHARA CAMERAS 48 MP isi ihe mmetụta - 8 MP obosara ihe mmetụta - 2 MP bokeh sensor
N'ihu CAMERA 16 MP
UMUAKA 4.500 mAh na 44W ngwa ngwa
OS A gam akporo 10 nwere IQOO UI
Njikọ 5G SA / NSA - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 -NFC - USB-C - Minijack
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ na n'akụkụ
Mkpụrụ na arọ: 163.97 x 75.53 x 8.93 mm - 194 gram
El iQOO Z1 ga-abata na agba abụọ dị: Ọchịchịrị acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ. Nga iwu ga-ebido na Mee 25th. Ọnụahịa nke ụdị 6/128 GB bụ 2.198 yuan (283 euro iji gbanwee), 8/128 GB nwere ọnụ ahịa nke yuan 2.498 (euro 321) na 8/256 GB na-ebili na yuan 2.798 (euro euro 360).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » IQOO Z1 ka ekwuputara na panel 144 Hz, Dimensity 1000+ na njikọ 5G
Otu asịrị na-egosi na Snapdragon 5 agaghị achịkwa Pixel 865